2020-04-07 @ 11:52 in Ankapobeny
Samy mahalala isika rehetra fa sahirana ny sarambabembahoaka. Maro ireo mitady ny haniny isan'andro, misy ireo efa tra-pahasahiranana lalina. Fa etsy ankilany ihany koa dia mahakivy ny toe-javamisy fahabetsahan'ny olona mifamezivezy sy mifamoivoiy manerana an'Antananarivo sy ny manodidina. Toa heverina ho adala ireo mba manaraka torohevitra hihibohana? Tsy voafehy intsony ilay vahoaka. Ahoana ny hamehezana ireo vahoaka tsy tan-dalàna manao izay tiany atao ireo? Dia avy amin'izay no mahatonga ity hevitro manaraka ity fa aza sainina zavatra hafa fa handiso zavatra maro! Satria koa manko efa nilaza mialoha ny fanjakana hoe raisin'ny fanjakana an-tanana iray manontolo ny fitsaboana dia lasa tsy miraharaha ny olona fa efa vonona ny hikarakara azy izany ny fanjakana raha marary izy, ataoko fa fahadisoana iray nataon'ny fanjakana ihany koa iny, raha jerena amin'ny toe-java-misy ankehitriny.
Hevitro manokana ny mba hitenenan'ny Filoha hoe "HEVERINA AMIN'IZAY NY HAMPANDOAVANA VOLABE AMIN'NY FITSABOANA COVID-19". TSy maintsy hitabataba amin'izay Ra-Malagasy Be-loha hoe ny fahasahiranana aza efa tsy anerany koa mbola ampandoavina volabe koa ny vahoaka? Maninona raha tonga dia vonoina fotsiny izao? Dia hovaliana amin'izay hoe tsy nanao masiaka mihitsy aho fa mba nandefitra amin'ny hoe mba misy ny mitady fivelomana fa tsy ho andeferana kosa ny fihetsika mihaika ny fandaminana napetraky ny fanjakana.
Raha tapabolana no mikotrika ny aretina dia raisina hoe manomboka amin'ny 14 avrily 2020 ho avy izao dia toy izao manaraka izao ny saram-pandoavana fitsaboana ny Covid-19:
1- Sazy aloa mialoha: 100.000 ariary noho ny tsy fitandremana
2- Sazy aloa mialoha hafa: 200.000 ariary noho ny mety ho efa namindrana tamin'olon-kafa sahady sy/na fandikana ny fepetra napetraky ny fanjakana tsy hivoaka ny trano.
3- 100.000 ariary tambin-karaman'ny mpitsabo miampy 50.000 ariary isaky ny mpanampy-mpitsabo mikarakara izay miisa roa farahafahakeliny
3- hofan'ny toeram-pandriana aloa isan'andro: 10.000 ariary, maninona moa no hoe toeram-pandriana? ho avy manko ny fotoana fa tsy ho ampy intsony io fandrianan'ny hopitaly io, ka afaka mitondra ny fandrianany ny marary fa tsy maintsy mandoa ny vola isan'andro ihany na izany aza.
5- manginy fotsiny tsy voatonona eto ny fanafody izay vidian'ny marary ihany koa. Azon'ny fanjakana koa anefa ny mametraka hoe ny fanafody ihany no iantohan'ny fanjakana satria efa nolazainy fa horaisina an-tanana. Ny marary kosa indray anefa no miantoka ny sakafo haniny isan'andro, fa raha avela ho ny hopitaly no manome sakafo dia 20.000 ariary isan'andro izany.
Raha mpiasan'ny tsy miankina mampiasa olona mandritra ny fihibohana kosa ilay tratran'ny Coronavirus dia ny orinasa no miantoka ilay marary ary mampitombo dimy amin'ireo voatonona etsy ambony no aloan'ny orinasa amin'ireo rehetra ireo.
Fa ny mpiasan'ny fahasalamana sy ireo mpanolotena mizara fanampiana ary ny mpitandro ny filaminana irery ihany sisa no iantohan'ny fanjakana manontolo ny fitsaboana. Tsy tafiditra amin'ny fiantohana kosa ny fianakavian'ireo voatonona farany ireo mba hifehezana hatrany ny fitandremana tsy hamindra amin'olon-kafa.
Mariho hatrany fa noho ny ditran'ny olona no mahatonga ity sosokevitro ity fa tsy fitiavana te-hahafaty olona. Amin'izay fotoana izay dia mba ho aretin-kenatra tsy miraharaha lalànam-panjakana hihiboka ity areti-mandringana iray ity. Afaka maka tahaka ihany koa ny firenena Afrikana hafa.